Jwxo-shiil oo Isku Dayaya Waan Waan Dhexmartay Eng. Salahdin – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Isku Dayaya Waan Waan Dhexmartay Eng. Salahdin
warar aanu ka helayno ilo xog ogaal ah oo aanu ka helay Magaalada Caasmara ee Cariga Eritariya, halkaas oo saldhig u ah Jwxo-shiil, ayaa waxay wararku sheegayaan in uu shaag u rogman la,a yahay Jwxo-shiil, ka dib kolkii uu dilay Dr. Dolal sanadkan bilowgiisii. Xiligaas oo uu is lahaa wax dambe oo kaa daba hadli doonaa ma jiraan kol hadaad dishay Dr. Dolal, oo isagu ahaa Astaanta ururka ONLF.
Salahdiin waxaa uu ka mid ahaa dadka ay aadka isugu dhawaayeen Dr. Dolal, wuxuuna ka mid ahaa 15 ruux, oo u kurkur roonaa ururka Jwxo, kuwaas oo uu Jwxo-shiil Inqilaabay bishii Julay 2005, xiligaas oo qaarkood la damcay in la dilo, balse Ilaahay ka badbaadiyey. Intii xiligaasi ka dambaysay ayey Jwxo noqotay labo garab oo heshiis iyo xal midna loo waayey, waxaana loo kala socday laba garab, culayska ugu weyn waxaa uu Jwxo-shiil fuulay, ka dib kolkii ay isaga iyo rag beeshiisa ka mid ah ay ku guulaysteen in ay si qarsoodi ah u dilaan Dr. Dolal, waxayna filayeen dilka ka dib in wax waliba uu noqon doono xagooda.
Jwxo-shiil, ayey arintu u noqon wayday sidii uu isagu jeclaa, waxaana ka horyimid dadweynaha Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba iyo walibka Ciidamada Jabhada, oo iyaga laftigoodu ka soo dhexbaxay dadweynaha, waxaana uu cidhiidhi ka soo baxay Ogadeeniya. Waxaa ay ilaa iyo maanta dadku qaadan la,a yihiin sida uu Jwxo-shiil ugu dhiiraday dilka Dr. Dolal, isaga oo isticmaalaya ciidan beeleed, in kasta oo beesha Dr. Dolal ayna wali wax talaabo ah ayna arintaasi ka qaadin, hadana waa arin had iyo goorba la filan karo in ay jawaab ka bixiso meesha Dr. Dolal.
Beesha ka sokow, waxaan iyagu marna badbaadin doonin Jwxo-shiil iyo xubnaha ka tirsanaan jiray ururka Jwxo ee ka qay baatay dilkii Dr. Dolal, gudo iyo dibad toona.
Salahdiin Cabdiraxmaan oo ah ninkii badalay Dr. Dolal, ayaa ah nin aad uga soo horjeeda Jwxo-shiil iyo garabkiisa gacan ku dhiiglayaalka ah ee ka soo horjeeda shuruucda Jabhada, Jwxo-shiil oo inta badan ayna wada soconin waxa uu afka ka sheego iyo waxa uu samaynayo, ayaa maanta meel cidlo ah ka taagan bulshada Somalida Ogadeeniya. Hadaba, in kasta oo ay jiraan arimo sheegaya in uu dad u soo diray Eng. Salahdin ayeyna marna suurto gal ahayn in uu Eng-ku uu hor fadhiisto ama uu hadal la furo Jwxo-shiil.
Dadka aad u shukaaminaya Eng. Salahdin, ayaa waxaa ku jira baa la yidhi, gabdho ka socda beesha Jwxo-shiil oo isku dayaya in ay isu keenaan Jwxo-shiil iyo Eng Salahdin, waxaana ay wararku sheegayaan in dadka aadka u yaqaan Eng. Salahdin in ayna marna suurto gal ahayn in uu la heshiiyo Jwxo-shiil, oo uu aad u yaqaan ninka uu yahay.
Arimahan uu haatan isticmaalayo Jwxo-shiil, ayaa ah arimo ku cusub dhaqanka Somalida Ogadeeniya, taas oo ah in haween loo diro cadowgaaga oo micnaheedu yahay in haweenkaas ay sameeyaan wax walba oo qancin kara ama qalbiga ka xadi kara cadowga.
Wixii ka soo kordha arimahan oo ah isku daygii ugu dambeeyey ee uu Jwxo-shiil ku doonayo in uu ku beer laxawsado Eng. Salahdin ayeynu u dhuun dalooli doonaa, hadii ay noo suurto gasho.
Dhibaatooyinkii uu Dhigay Jwxo-shiil oo ku Dhex Baahay Dadweynah Somalida Ogadeeniya
Horta Qaaraan Diide Qoladeena Ma Yahay